एमाले बैठकमा माधव नेपालले किन झपारे ईश्वरलाई ? - Pahilo News
एमाले बैठकमा माधव नेपालले किन झपारे ईश्वरलाई ?
काठमाडौं । आफैं विधि, विधान र मापदण्डविपरीत जथाभावी निर्णय गर्दैै जाने अनि आफंै ओभानो बन्न खोज्दा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा महासचिव ईश्वर पोखरलले सारा केन्द्रीय सदस्यका अगाडि लज्जित हुनुपरेको छ ।
अघिल्लो वर्षको चैत २७ गते सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरुका दिनमा हार्दिकताका साथ नै चलेको थियो । पहिलो दिन अध्यक्षको प्रतिवेदन मात्र पेस भएर समूहगत छलफलका लागि बैठक स्थगित भएकाले त्यहाँ नेताहरूबीच घोचपेचको कुनै स्वाभाविक –अस्वाभाविक छनक देखिएन । २८ गते सबै समूहगत छलफलमै लागे । २९ गते एकैछिन बसेर नयाँ वर्षको दिन बस्ने गरी स्थगित भयो । वैशाख १ गते शुभकामना आदानप्रदान र रात्रिभोजमा नै सबै रमाए । तर, २ गते बसेको बैठकमा अनुशासन आयोग र सल्लाहकार समितिले प्रतिवेदन पेस गरिसकेपछि महासचिव पोखरेल अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कानेखुसी गर्न लम्किएपछि धेरै सदस्यले अनुमान लगाइसकेका थिए– ‘अब कुनै ठोस निर्णयविनै यत्तिकै अध्यक्षले सम्बोधन गरेर बैठक सकिने भयो ।’ यसबीचमा गुटगत आधारमा भएका राजनीतिक नियुक्ति, संस्थागत निर्णय र मापदण्डविना महासचिव पोखरेलले यसबीचमा पार्टीबाट गराएका विदेश भ्रमणलगायतमा विषयको समूहगत छलफलमा आलोचना भएको थियो ।
पुनः फ्लोर ओपन गर्दा ती विषय पुनः उठ्ने र आफूमाथि सदस्यहरूको प्रहार हुन सक्ने देखेर महासचिव पोखरेलले अध्यक्ष ओलीलाई २ गते नै बैठकको समापन गर्न कान फुकिसकेका थिए । तर, वरिष्ठ नेता माधव नेपालले हात उठाएर बोल्न खोजे । नेपालले हात उठाएपछि बोल्न नदिने भन्ने कुरै भएन । आफ्नो मन्तव्यका क्रममा नेपालले महासचिव पोखरेललाई इंगित गर्दै छाँस्नुसम्म छाँसे ।
‘म विदेश विभाग प्रमुख छु, पार्टीबाट भएका विदेश भ्रमणबारे मलाई जानकारी हुँदैन । कसले, कुन मापदण्डका आधारमा भ्रमण टोलीको छनोट गरेको छ ? विदेश भ्रमणमा जानेहरूको नाम कुनै नेताको खल्तीबाट आउने गरेको छ । केही दिनपछि पनि स्थायी समिति सदस्यको नेतृत्वमा एउटा, पोलिटब्युरो सदस्यको नेतृत्वमा अर्को र महासचिवकै नेतृत्वमा अर्को टोली चीन जाँदै छ भन्ने सुन्दै छु, ती निर्णय कहाँबाट, कसरी भए ?’ खासगरी भूकम्पपछि महिनैपिच्छेजस्तो गरी भएका चीन भ्रमणमा महासचिव पोखरेलले संस्थागत निर्णयविना नै आफ्नो छोरा, पिए, श्रीमतीको पिए, पिएको भाइलगायतका नातेदार र आसेपासेलाई पठाएको विषयलाई लक्ष्य गर्दै नेपालले पोखरेललको उछितो काढेका थिए ।
त्यो दिन बोल्न नपाएका पोखरेलले भोलिपल्ट अर्थात् बैठक समापनको दिन वैशाख ३ गते बोलेका थिए । अघिल्लो दिन नेपालले गरेको सम्बोधनबाट चिढिएका उनले आफ्नो कमजोरी स्विकार्नुको साटो उल्टै आफ्ना गलत निर्णयको बचाउ गर्न थालेपछि नेता नेपाल फेरि पोखरेलमाथि खनिए । पोखरेलले विगतमा पार्टी कसरी चलेको थियो, निर्णय कसरी हुन्थे त्यो मलाई पनि थाहा छ भन्दै आफ्ना कमजोरी ढाक्न खोजेका थिए ।
अघिल्लो दिन महासचिव पोखरेलको नाम नलिई आफ्ना भनाइ राखेका नेपालले पोखरेलका यति कुरा सुनेपछि उनको नाम नै लिएर फेरि भने– ‘म ईश्वर पोखरेललाई चुनौती दिन चाहन्छु, विगतमा कुन निर्णय संस्थागत भएको थिएन, त्यसको एउटै प्रमाण ल्याउनुस् ।’ नेपालले यति भन्नासाथ पोखरेल कालोनीलो भएर घोसेमुन्टो लगाएर बसेका थिए ।
त्यसो त समूहगत छलफलका क्रममा पनि महासचिव पोखरेल रहेको समूहमा केही सदस्यले उनको आलोचना गरेका थिए । सो समूहका पार्टीभित्र अध्यक्ष ओलीनिकट मानिने देवराज घिमिरेले सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए । ‘यो सरकार तस्कर र माफियाहरूले चलाएका छन्, मेरो भनाइ यही त्यही कुरा टिप्नुस्’ भन्दै घिमिरेले आफ्ना कुरा राखेपछि महासचिव पोखरेलले त्यतिबिघ्न त होइन होला है भन्दै घिमिरेलाई खसाल्न खोजेका थिए । तर, उनको त्यो प्रतिक्रिया उनैमाथि यस्तरी सोझियो कि त्यहाँ पनि महासचिवले रातोपिरो हुनुपर्‍यो । पोखरेलले आफ्ना कुरालाई हल्का रूपमा लिएपछि घिमिरेले ‘तस्करहरूबाट तपाईंले पनि पाउनुभएको छ कि’ भन्दा शंका जनाएका थिए ।
वामदेवका मान्छे बाँडिए
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमनिकट मानिने केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू यसपटकको बैठकमा भने बाँडिएका थिए । नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट गौतम बैठकमा जाँदै गएनन् । गएका उनीनिकट मानिने सदस्यहरूमध्ये किरण गुरुङ, मोहन बानियाँ, गणेश ठगुन्नालगायतले नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए भने यामलाल कँडेल, पद्मा अर्याललगायतले बचाउ गरेका थिए । स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका गुरुङले त समूहगत छलफलमा अध्यक्षको प्रतिवेदन पार्टीमुखी नभएर सरकारमुखी भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । उनको भनाइ थियो–‘‘यो प्रतिवेदनमा सरकारले के गर्‍यो भन्ने मात्र उल्लेख छ, पार्टीले के गर्‍यो भन्ने केही छैन । हुन त उल्लेख गर्न पार्टीले केही गरेको पनि हुनुपर्‍यो । यति ठूलो कमिटी बनाइएको छ । जिम्मेवारी कसैलाई छैन । धेरै बिरालाले मुसा मार्दैनन् भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको हालत हेरेर पनि स्पष्ट हुन्छ ।’